Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in hanjabaadaha argigixiso ee ka imaanaya wadamada Soomaaliya, Yemen, Suuriya iyo Ciraaq gaar ahaan ISIS- ay ka khatar badan yihiin kuwa laga yaabo inay ka soo baxaan dalka Afgaanistaan.
ⓘAgaasimaha Sirdoonka Qaranka Maraykanka Avril Haine, ayaa hadalkaan ka sheegtay, iyadoo ka hadlaysay shir sannadeedka saraakiisha sirdoonka iyo Amniga Qaranka.
“Halista hadda ka imaanaysa kooxaha argagaxisada, Afghanista kuma jirto liiska ugu sarreeya,” ayay tiri Haines, oo intaas ku dartay in Sooomaaliya, Yemen, Suuriya iyo Ciraaq loo arko in ay yihiin halista ugu weyn oo kusoo wajahan Maraykanka.
« Xildhibaanada Hirshabelle oo Maanta Dooranaya Qaar ka mid ah Xildhibaanada aqalka sare.
Gudoomiye Muungaab ” Farmaajo waxuu rabaa inuu fal dambiyeed Hor istaago. »